site Carisa Peterson
emelitere ikpeazụ: Jan. 05 2018 | 3 min agụ
A ndepụta ụzọ iji mara onwe gị ntakịrị mma, eme ka ị "a lotta bit" ihe dateable
The ndudue ọtụtụ ndị na-eme ha na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ndụ na-adịghị na-enwe ezi echiche nke ndị ha, onwe ha, na-. O nwere ike iyi counterintuitive, ma mgbe ị na-arụsi ọrụ ike na-agbalị ịchọta onye bụ otu n'ime ndị kasị mma ugboro-elekwasị anya na gị na ihe na-eme ka ị na- “akọrọ”. Women, ihe karịrị ndị ikom, na-ewekarị “Na-amasị m ọ bụla Akpama”-Ọrịa (ma eleghị anya, n'ihi na egbu omenala na-atụ anya na ndị inyom na-azọrọ na na-na-agbanwe, amorphous ndị kọrọ ọdịmma nke onwe ha), n'ikpeazụ n'ihi na unsatisfactory na unfulfilling mmekọrịta na mma; na ịtụnanya, egbughị oge na iwe iwe mgbe onye nke ọzọ na-enwe “gbanwere”, ke kasị njọ.
Otu n'ime ndị kasị amasị m okwu na-aga ihe dị ka–otú a onye ọzọ kwesŽrŽ mara ma hụ na i, ma ọ bụrụ na ị na-amaghị na ahụ gị n'anya? Etinye ịmara onwe gị na-enye ohere ka ị mara kpọmkwem ihe ị na-na tebụl, na-eme ka ọ dịkwuo mfe n'ihi na gị na Right One ịmata onye ọ bụla ọzọ na inwe mmasị n'ebe àgwà na-adịghị aga ịgbanwe na gị ụlọ ọrụ ma ọ bụ na afọ.
Dị ka Shel Silverstein-ede ya uri, “Masks”:
O nwere-acha anụnụ anụnụ akpụkpọ
Otú ahụkwa ka o
O mere ka o zoro
Ha Chọrọ-acha anụnụ anụnụ
Ha dum ndụ site
Mgbe ahụ gafere ezi site–
Na mgbe maara
Lee ụzọ ụfọdụ na-esi mara ma hụ na ị, nke mere na onye ọzọ nwere ike, kwa!
1. Were Onwe Gị Ọ
Nke a na-ebugharị gburugburu dị iche iche na myriad “enyemaka onwe onye” gurus, akwụkwọ, na ndị inyom na iche iche. Ndị mmadụ ga-eche banyere ya na okwu nke nri abalị, nke nwere ike ịbụ na-eyi egwu na ihere ma ọ bụrụ na unu na-adịghị eri nri na ọha nanị ya nọ tupu. N'ihi ya, ọ pụrụ ịbụ ọ bụla dị ịrịba outing, dị ka ogologo oge dị ka ọ bụ ihe ntụrụndụ na ihe ị na-enwe–a nkiri (Ozugbo ọkụ gbadaa, dịghị onye na-lekwasịrị anya onye na-ọdụ naanị), a bọl egwuregwu, ma ọ bụ ma eleghị anya, a ụbọchị njem ebe ọhụrụ.
2. Gịnị ka ị chọrọ ime Today?
Nwere ụfọdụ free oge? Kwụsị maka a nkeji na nnọọ ịjụ onwe gị ihe ga-eme gị obi ụtọ nri ahụ–na ahụ na-aga na-eme ya! Nke a bụ otu n'ime ndị kasị mfe ma dị irè ụzọ na-akụ si mkpọtụ nke ndụ na-akwụsị igbu oge site na-aracha ya aracha n'ime Facebook ma ọ bụ telivishọn. Ọ na-emepe gị ruo na ọtụtụ ndị ọzọ random, kpokọtara twists na odomo, na-ezute na ọtụtụ ndị ọzọ karịa gị ga-, n'echeghị echiche na amaghị ama na-egbu oge. Na usoro, ị ga-achọpụta na unu adịghị mkpa onye tinyere-enwe obi ụtọ–i nwere ike inwe obi ụtọ na-emere site nzube gị na nhọrọ.
3. Jụọ Ndị Enyi Gị
Nke a bụ ụdị ihe elaboration nke na-ewu ewu Facebook ọrụ na-arịọ ndị mmadụ na-aza ajụjụ na post na a okwu na-akọwa posta. Ma i nwere ike ịmụta banyere onwe gị, ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ banyere ọha na eze iche na echiche nke onwe gị, site na-arịọ enyi gị otú ha ga-akọwa ị. Nke a ga-enyere ìhè “Ị” nke i na-na ụwa, na Ya mere ụbọchị. Enwere Ike, na yikarịrị, a ọkụ na ihe i kweere bụ gị ezi onwe. Ma ọ bụrụ na ị na-n'amaghị ama aghọta ka enwe a dị iche iche agwa karịa ihe ị maara bụ eziokwu banyere gị–nke a nwere ike ndinyene dị ka a eriri nke ọma, mgbagwoju anya mmekọrịta.
4. Gbalịa New Things
Nke a bụ ụdị nke na-abụghị nke #2. Kama n'imeso onwe gị ka ihe ị maara ị ga-achọ na-eme, na-eme ihe ọhụrụ kpamkpam! Mgbe gbakọrọ a ịnyịnya tupu? Chọta a ụlọ ọrụ na-enye mfe nzọ ụkwụ agafe. M ga-akwadoghị ime ihe ọ bụla frightens uza anya nke ị, n'ihi na–mgbe na pụrụ ịdọta ụbọchị–gị egwu nwere ike ịdọpụ uche si inwe ike na-enwe a ahụmahụ ọhụrụ. Ná ngwụsị nke ụbọchị, ị ga-dịpụrụ adịpụ ọzọ ahụmahụ ná ndụ na-enyere aka kọwaa gị na ọdịmma, na ị nwere ike ọzọ nkà na mkparịta ụka na-arụtụ aka na-eme ka table.
Inwe a obi ike n'echiche nke onwe bụ mara mma. Site n'ịzụlite echiche nke onwe, ị ga-enwe obi ụtọ a, ọzọ mezuru onye na ị ga-enwe na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-enye na-a mmekọrịta; na dịgodị, ị nwere otutu fun ịmara unu na unu bụ ndị niile banyere.